Caruuraha la nool qoysaska fakhrigaa oo dalkaan kor u sii kacaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruuraha la nool qoysaska fakhrigaa oo dalkaan kor u sii kacaya
Publicerat torsdag 25 november 2010 kl 10.19
Dalkaan Iswiidhan ayaa waxaa kor u sii kacaya caruuraha la nool qoysaska fakhriga ah oo mudada dheer qaadanayey lacagaha cayrta,waana sanadkii shanaad oo ay tirada caruurtaasi fakhriga ku nooli si isdabajoog ah kor ugu kacdo taasina waxay raad ku yeelaneeysaa mustaqbalka caruurahaas.
Ilaa 54 000 oo ilmood ayaa xilligaan la nool qoysas fakhri ah tiradaas oo 10 000 oo ilmood ka badan laga soo bilaabo sanadkii 2006-dii.
Dalkaan Iswiidhan kama jiraan wax nidaam rasmiya ah oo qeexaya fakhrinimada ,waxaase hadba la isticmaalaa xaqiiqooyin dhab ah oo loo cuskado hadba arrinta markaas muraadka laga leeyahay.
Tusaale ahaan hay'adda khasnadda caymiska ee loo yaqaano "försäkringskassan " waxay sameeysaa baaritaano ay ku eegto in qofkii ama qoyskii ay soo galaan dakhli ka hooseeya lacagta ugu yar ee ugu filan nolol maalmeedkiisa si qofkaas ama qoyskaas loo siiyo lacagta mucaawinada .
Hay'adda tirakoobka ee loo yaqaano SCB ayaa iyaduna fakhriga ku saleeysa qoyskii ay ku adkaato in ay iska bixiyaan nolol maalmeedka daruuriga ah ama aan wax dhaqaale ah heli karin haddii arrin deg deg ah oo kharash u baahani ay la soo gudboonaato.
Ururka shaqaalaha ee LO ayaa qoysaskaas fakhrigaa u aqoonsan qoysaska bishii isticmaala lacag aan ka badneeyn 8 000 oo karoon .
Xisbiga bidixda ee Vänster-ka ayaa isna qaba in qofka fakhriga ahi yahay kii dakhliga soo galaa yahay boqolkiiba lixdan,marka la barbardhigo dakhliga caadi ahaan u soo gala qofka dhakhligiisu dhexdhexaadka yahay.